Ngwaọrụ ahia ahia Forex FXCC
Home / trading / Ngwaọrụ Forex
Nwee ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ ahụ
Na FXCC, anyị agafeela ogologo iji chịkọta ngwá ọrụ ngwá ahịa bara uru. Anyị na ndị ọkachamara na-akpakọrịta; n'èzí, n'ụlọ ma dị mkpa karịa ndị ọkachamara kachasị mkpa anyị - ndị ahịa anyị, iji nye ndepụta a zuru ezu, nke ga-agbakwunye ngwá ahịa anyị mgbe anyị na-azụ ahịa.
Ihe omuma akwukwo a di mkpa ga - enwe otutu ihe ndi mmadu ga - achoputa na ihe ozo. Ihe siri ike nke ọtụtụ ndị ahịa nwere ahụmahụ; kalenda akụ na ụba, jikọtara ya na mgbakwunye ọhụrụ anyị; pụrụ iche FX ahịa wijetị. Otú ọ dị, iji kalenda a gbanwere dị ka ihe atụ, ọ na-egosipụta ọkwa nlekọta na nkọwa anyị banyere, iji nye ndị ahịa anyị ihe kachasị mma dịnụ.
Anyị kwenyesiri ike na ngwá ọrụ ndị a ga-enye ohere maka ndị ahịa anyị ịzụlite nkà ha ma nwekwaa ahụmịhe ahịa ahịa ka mma. A họpụtara ngwá ọrụ ọ bụla iji nwee ụfọdụ njirimara iji wepụta uru ndị pụrụ iche.
O doro anya na ngwá ahịa kachasị mkpa ahịa na ndị ahịa kwesịrị ịnọgide na desktọọpụ ha, ma ọ bụ na-emeghe na taabụ ọzọ na kọmputa ha. Enwere ike ịhazi kalenda akụ na ụba FXCC ugbu a ka ndị ahịa wee nwee mmasị.
Ịmara ebe ọtụtụ ndị ahịa FX nọ n'ọnọdụ nwere ike igosi na ha bara uru mgbe ha na-eme mkpebi banyere nduzi ego nke ego.
Ngosipụta nke mmetụta a, nke dabeere na afọ nke akụkọ nchịkọ akụkọ ihe mere eme, na-enye ndị ahịa windo n'ime echiche ndị ahịa n'ụwa nile.
Dịka ọmụmaatụ, oge ahịa na-agbanwekarị, dịka ọmụmaatụ, n'ihi oge okpomọkụ nke Britain, ọ dị oké mkpa na ndị ahịa na-akpachara anya maka oge ndị ahịa, dịka New York, meghere.
Ulo oru ndi ozo ama ahia
Dị ka isi ụlọ ọrụ akụ na ụba na-emepụta mkpebi ndị ahịa ga-ama ọkwa ọnụ ọgụgụ dị elu n'ụwa dum, karịsịa site na ụlọ akụ etiti etiti maka nnukwu ego dịka; USD, GBP, EUR, YEN.
Nkọwa ahịa nke FX na-abata n'ụdị dị iche iche abụọ; nyocha na isi nyocha. Ndị ahịa nwere ike ijikọta ha abụọ, ka ha nwee ike ịmekwu mkpebi ndị ọzọ
Idebe ihe omuma ozi na nnweputa data bu ihe di egwu nke ahia ahia. Otú ọ dị, ịkụsa akụkọ, nyocha nke ụzụ, nyocha na echiche dị mkpa na-enyekwa nkọwa dị mkpa banyere ebe ahịa na-aga.
Rịba ama na oge na-abịa site na ECN, kọmputa na-ahazi netwọk, ka anyị kwụ ọtọ site na nhazi nhazi nyere. Nke a na-agbasa, nke a na-agbakọta site na ọrụ interbank FX, na-eme ka ndị ahịa ahịa FXCC bụrụ ezi, ọnụahịa kachasị mma nke dị 24 / 5.
Ọnụ ọgụgụ nke anyị na-atụgharị uche na-enye anyị "ọrụ nhazi" dị oke mkpa. Ọ bụrụ na ịchọrọ: gbakọọ nha ọnọdụ, chegharịa akụkụ nke ị chọrọ, mkpa iji tụlee nha nke kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ, usoro a ga-enyere aka.